တရုတ်လူမျိုးတစ်ဦးရဲ့ စီးပွားရေး ဈေးကွက် အပိုင်သိမ်းမှု | ထွေထွေထူးထူး ကိုရွှေထူး
Lo Ping Zhong (aka Steven Law, aka Tun Myint Naing) the head of Asia World in Toronto, June 5, 2014. Credit: Asia Pacific Foundation of Canada. Note small file size. [PNG Merlin Archive]
တရုတ်လူမျိုး ဦးထွန်းမြင့်နိုင်(Asia World)က ရန်ကုန်လေဆိပ်ကို ဘယ်လိုချယ်လှယ်ခဲ့ သလဲဆိုတာ နည်းနည်း ထပ်ပြောပါမယ်။ တကယ်တော့ လေဆိပ်တစ်ခုရဲ့ အော်ပရေတာ အနေနဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရမယ့်ကိစ္စတွေမှာ မရှင်း မလင်းဖြစ်နေ တာတွေ အတွက် ဝေဖန်စရာတွေ ရှိနေပါတယ်။ ရိုးသားမှုနဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဆိုတာက ဒွန်တွဲနေတဲ့အရာတွေပါ။
Airport Operator အနေနဲ့ လေဆိပ်မှာရှိတဲ့ ဆိုင်တွေရဲ့ Space Allocation ကို စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိပေမယ့် ကိုယ့် သဘောနဲ့ကိုယ် လုပ်လို့မရပါဘူး။ မြင်သာ၊ထင်သာရှိတဲ့ စနစ်နဲ့ လုပ်ရပါမယ်။ (ဈေးတစ်ဈေးမှာ ဈေးခေါင်း က သူ့ဆိုင်နဲ့ သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေအပေါင်းအသင်းတွေကျတော့
နေရာကောင်းမှာပေးပြီး၊ ကျန်တဲ့ ဆိုင်တွေကို ချောင်ထိုးတဲ့အလုပ်လုပ်လို့ မရသလိုပေါ့။) တင်ဒါတွေ ခေါ်ရပါမယ်။ ဈေးနူန်းတွေ တိုးပြီးတောင်း တာကရော ဘယ်စနစ်အပေါ်အခြေခံပြီး တောင်းတာလဲ။
Airport Operator အတွက် တင်ဒါတောင်းခံခဲ့တုန်း က ဘယ်လိုစည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေ ရှိခဲ့လဲ။ မြေဧကဘယ်လောက်ငှားခွင့်ရပြီး တစ်ဧက ဘယ် လောက်နူန်းလဲ။ အရင်းကြေ ကာလဘယ လောက်တွက်ပြီး ၀င်ငွေရပေါက်ရလမ်းတွေ ဘယ်လိုဖော်ပြခဲ့လဲပေါ့။ ဒါတွေကို ပွင့်လင်းမြင်သာအောင် ရှင်း မပြဘဲ ကိုယ်သတ်မှတ်ချင်တဲ့ဈေးနူန်းသတ်မှတ်ပြီး တောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့။
ဒါက မြေ နေရာလောက်ပဲရပြီး လေဆိပ်အသစ်ကြီးဆောက်နေရတာလဲ မဟုတ်ဘူး။ Existing Facility တွေ သုံးပြီး Extension လုပ်ရတဲ့ သဘောဘဲရှိတာ။
အထက်မှာဖော်ပြခဲ့သလို ၂.၇.၂၀၁၂ ရက်နေ့မှာ ဟံသာဝတီ လေဆိပ်ကိစ္စ DCA က ချပြရှင်းလင်းပုံက ဟံသာဝတီလေဆိပ်ကို ဆွဲထားတဲ့ Schedule တွေ အတိုင်းလုပ်ပြီး ပြီးသွားရင် ရန်ကုန်လေဆိပ်က Domestic Airline လောက်ပဲ ကျန်ခဲ့ပြီး General Aviation ကိစ္စအဓိကလုပ်ရမှာ။ ဟံသာဝတီလေဆိပ်ကို အထောက် အကူပြုတဲ့ လေဆိပ်အနေနဲ့ပဲ ရှိတော့မှာမယ့်အနေအထားပေါ့။ ခရီးသည် (၅.၄) သန်းလောက် handle လုပ်နိုင်တဲ့ Facility ရှိဖို့ပဲ အဓိကလုပ်ရမှာ။
ဒါက ဟံသာဝတီလေဆိပ် အတွက် Successful Tenderer နဲ့ back up Tenderer တွေနဲ့ ဆွေးနွေး တဲ့အပိုင်းမှာလည်း အဓိကအချက် အနေနဲ့ ပါနေတာ။ အခုတော့ ဦးစိုးသိန်းနဲ့ ပေါင်းပြီး ခရီးသည် သန်း ၂၀ လောက် handle လုပ်နိုင်တဲ့ အဆင့် အထိ ကျိုးစားနေတယ်ဆိုတော့ တစ်ဖက်က ဟံသာဝတီလေဆိပ် Project ကို ပျက်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာ မပေါ်လွင်ဘူးလား။ ဟံသာဝတီလေဆိပ်ပြီးလို့ ပြောင်းသွားရင် သူ့ရဲ့ ၀င်ငွေက ကျသွားမှာလေ။ နိုင်ငံအတွက် မဟုတ်ဘဲ သူတို့အတွက်ပဲလုပ်နေတယ်ဆိုတာ မထင်ရှားဘူးလား။
DCA က ပြည်တွင်းလေဆိပ် (၃၀)ကိုလည်း PPP (Public Private Partnership) လုပ်ဖို့ အဆိုပြုလွှာ တွေ လက်ခံခဲ့ပြီးမှ ဥပဒေတွေ၊နည်းဥပဒေတွေ မရှိသေးလို့၊ မထုတ်ပြန်ရသေးလို့ဆိုပြီး စောင့်နေခဲ့တယ်လို့ပဲ နားလည်ထားတာ၊ အခုတော့ ဘာဥပဒေတွေနဲ့ လုပ်နေကြတာလဲ။ ဒီလိုပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိတဲ့အချက်တွေက နိုင်ငံတိုးတက်ရေးကို အဓိကမထား တဲ့လုပ်ရပ်တွေလို့ပဲ ကောက်ချက်ရတော့မှာပါဘဲ။
This entry was posted in Artical and tagged asia hi tech, asia world, ခရိုနီ, ထွန်းမြင့်နိုင်, ဘိန်း, ငွေမည်း, လောဝ်စစ်ဟန်, black money, blogger, Burma, burma crony, Burma News, crony steven law, crony tun myint naing, law sitt han, Myanmar, myanmar cronies, Myanmar News, Myanmar News Update, Myanmar Update News, steven law, tun myint naing on September 2, 2015 by koshwehtoo.
← 2015 MMI ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းအလားအလာ →